नेदरल्यान्ड्सको लगातार तेस्रो जित – Khabar Silo
नेदरल्यान्ड्सको लगातार तेस्रो जित
५ कात्तिक, काठमाडौं । आईसीसी टी–२० विश्वकप क्रिकेट छनोट प्रतियोगितामा नेदरल्यान्ड्सले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ ।
यूएईमा भएको समूह ‘ए’ को खेलमा नेदरल्यान्ड्सले सिंगापुरलाई पाँच विकेटले पराजित गरेको हो । १०२ रनको सामान्य चुनौती पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको नेदरल्यान्ड्सले १६.३ ओभरमा पाँच विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्‍यो ।
नेदरल्यान्ड्सको जितमा म्याक्स ओडवडले ३५ र कोलिन एकरमनले ३४ रन बनाए ।
यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सिंगापुरले १८.५ ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा १०१ रन बनाएको थियो । सिंगापुरका लागि सुरेन्द्रन चन्द्रमोहनले २८ र अरित्र दुत्ताले २० रन बनाए । सिंगापुरलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा रोइलोफ भान र टिम भानले समान ३–३ विकेट लिए ।
यो जितसँगै नेदरल्यान्ड्सले तीन खेलमा शतप्रतिशत जित हात पार्दै ६ अंक जोडेर समूह ‘ए’ को शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।
अपराजित रहँदै पाकिस्तान आईसीसी टी-ट्वान्टीकाे सेमिफाइनलमा
Posted on November 3, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं – लगातार चौथो जित निकाल्दै पाकिस्तान आईसीसी टीऔट्वान्टी विश्वकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार भएको सुपर–१२ को समूह–२ मा पाकिस्तानले नामिबियालाई ४५ रनले पराजित गर्दै विश्वकपको सेमिफाइनल यात्रा तय गरेको हो । जितका लागि १९० रनको लक्ष्य पाएको नामिबियाले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १४४ रनमा सीमित भयो । नामिबियाका लागि डेविड विसे […]
८ वर्षीय बासिल, जसले नेयमार र मेस्सीको रेकर्ड तोडे
Posted on February 1, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं– ब्राजिलका ८ वर्षीय बाल खेलाडी काउन बासिलले विश्व फुटबलमा राज गरिरहेका लियोनल मेस्सी र नेयमारको रेकर्ड तोडेका छन्। विश्व चर्चित स्पोर्टस् ब्रान्ड नाइकसँग सम्झौता गर्दै बासिलले मेस्सी र नेयमारको रेकर्ड तोडेका हुन्। उनले मेस्सी र नेयमारले नाइकसँग व्यावसायिक सम्झौता गरेको उमेरभन्दा कम उमेरमै सम्झौता गरेका छन्। ब्राजिलियन फुटबल क्लब सान्टोसका बासिललाई ब्राजिल फुटबलको भविष्यका […]
लेभान्टेसँग बार्सिलोना पराजित, रियल मड्रिड रियल बेटिससँग बराबरीमा रोकियो
Posted on November 3, 2019 Author admin
स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत शनिबार राति भएको खेलमा शीर्ष स्थानको बार्सिलोनाले अप्रत्यासित हार ब्यहोरेको छ । बार्सिलोना लेभान्टेसँग ३–१ ले पराजित हुँदा दोस्रो स्थानको रियल मड्रिड रियल बेटिससँग र तेस्रो स्थानको एट्लेटिको मड्रिड सेभियासँग बराबरीमा रोकिएको छ । लेभान्टेको मैदानमा बार्सिलोनाले पहिलो हाफमा एक गोलको अग्रता लिएपनि घरेलु टिमले दोस्रो हाफमा तीन गोल फर्कायो । […]
पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन हेर्नुहोस ०७६ कार्तिक ०६ गते बुधबार ई. स. २०१९ अक्टोबर २३ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
नेपाल बंगलादेश वैठकमा क्षेत्रीय उडान विस्तारबारे छलफल